U-Apple ususe i-Fortnite ku-App Store kanye ne-Epic emangalela i-Apple ngezenzo zokulwa nokuncintisana | Kusuka kuLinux
U-Apple ususe i-Fortnite ku-App Store kanti i-Epic ngokushesha imangalela i-Apple ngemikhuba yokulwa nokuncintisana
Ngemuva kokuthi i-Epic Games ikhiphe isibuyekezo se-Fortnite IBattle Royale lapho kuvunyelwe abadlali ukuthi bakhethe ukuthi bazokwenza kuphi izinkokhelo zabo futhi empeleni ngikwazi ukweqa ikhomishini engama-30% edingwa yi-Apple lapho wenza izinkokhelo ezingaphakathi nohlelo, U-Apple ususe iBattle Royale ku-App Store.
Futhi manje I-Epic Games imemezele ukuthi isithathele izinyathelo zomthetho i-Apple ukuqeda imikhawulo yokuncintisana inkampani enayo ezitolo zohlelo lokusebenza lwe-smartphone.
Eqinisweni, I-Epic isungule uhlelo lwayo lokukhokha ngaphakathi nohlelo eyeqa izinga elijwayelekile lika-30% le-Apple eliyethule ngoLwesine. Lesi sibuyekezo sinciphisa kakhulu amanani ngezaphulelo ezingafika kuma-20%, futhi futhi wethula izaphulelo kuzo zonke izindleko ngemali yangempela.
U-Epic ushicilele okuthunyelwe ngebhulogi izolo lapho ichaza ukukhokha okuqondile kwa-Epic. Ngakho-ke, inkampani ihlasela kakhulu i-Apple ne-Google, kepha nezinye izitolo zohlelo lokusebenza.
Ngaphandle kwe-App Store ne-Play Store, lezi ziphulelo zisebenza nasekuthengweni kwamanye amapulatifomu, njenge-PC, iMac, i-Xbox, i-PlayStation neNintendo Shintsha.
"Lesi akusona isipho ... lawa amanani entengo ancishisiwe atholakala nganoma yisiphi isikhathi!" Kuyasijabulisa ukudlulisela kuwe le mali esongelwe yona futhi sizoqhubeka nokufuna ezinye izindlela zokuhlinzeka ngokubaluleka kubo bonke abadlali bamaFortnite, ”kubhala u-Epic kuwebhusayithi yakhe esemthethweni. Lokhu kuqhubekisela phambili ubutha phakathi kuka-Apple nomshicileli womdlalo.
Ngokufanayo, le ndlela yoku I-Epic iza ngesikhathi esibucayi kakhulu se-Apple, selokhu umkhiqizi we-iPhone ibhekene nokukhathazeka ngokuncintisana maqondana nokusebenza kwe-App Store nemithetho eliyibeka konjiniyela abathile.
Umphathi omkhulu wenkampani, UTim Cook, naye wayebizelwe ukuzofakaza phambi kwe-US Congress ngasekupheleni kwenyanga edlule. Kodwa-ke, lokhu akuzange kuyikhathaze kakhulu inkampani, ngoba akuzange kunqikaze umzuzwana ukuvimba i-Battle Royal, eyayizama ukusizakala ngezinzuzo zayo.
Kusukela lapho kuqhubeke, izinto zahamba ngokushesha okukhulu. Ngemuva kokuvinjelwa, i-Apple yakhipha isitatimende ukuyichaza. "
Namuhla, ama-Epic Games enze isinqumo esingesihle sokwephula imihlahlandlela ye-App Store esebenza ngokulinganayo kubo bonke onjiniyela futhi eyenzelwe ukwenza isitolo siphephe kubasebenzisi bethu.
Ngenxa yalokhu uhlelo lwabo lwamaFortnite selususiwe esitolo, ”kusho yena. U-Apple uthe ukulungele ukusebenzisana ne-Epic "ukuxazulula lokhu kwephula umthetho" kepha akahlose ukuthola "ukulungiswa okukhethekile" ngakho.
Okwamanje, U-Epic umemezele uchungechunge lokuphendula okubalwe ngokucophelela, kufaka phakathi icala lokulwa nokuthembana kuhloselwe ukuqeda ubukhosi lapho iApple App Store isivele isolwa hhayi yibo kuphela kepha nangabanye abathuthukisi abaningi nevidiyo yokubhikisha yasakazwa ku-YouTube nangaphakathi kwe-Fortnite.
Ividiyo ihlekisa ngomkhangiso wesithonjana somenzi we-iPhone "1984" futhi ngibize abalandeli bemidlalo ku- #FreeFortnite ukuxhasa impi yabo ne-Apple. Lesi sakamuva sithe i-Epic ivumelane ngokukhululekile nemigomo nemihlahlandlela ye-App Store iminyaka eyishumi nokuthi lezi zinhloso zebhizinisi akumele manje ziholele ekutheni afune isivumelwano esikhethekile.
Ngakolunye uhlangothi, I-Google nayo ithathe isenzo esifanayo yasusa umdlalo ku-Google Play Isitolo.
Abasebenzisi be-Android basengalanda i-Fortnite, noma kunjalo, besebenzisa isiqalisi sohlelo lokusebenza lwe-Epic, esisabalalisa ngokuzimela nganoma yisiphi isiphequluli sewebhu esiphathekayo.
“Uma i-Fortnite isatholakala ku-Android, ngeke sisakwazi ukuyenza ku-Play ngoba yephula izinqubomgomo zethu. Kodwa-ke, siyajabula ukuqhubeka nezingxoxo zethu no-Epic futhi sibuyise uFortnite ku-Play, ”kusho okhulumela i-Google.
Okwamanje, labo asebevele balande i-Fortnite ku-iOS basengayidlala, ukulanda okusha kuphela kukhutshaziwe ngoba i-Apple isuse umdlalo esitolo sayo. Ngaphezu kwalokho, kuleli cala kusazokwazi ukusebenzisa uhlelo lokukhokha esicelweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » U-Apple ususe i-Fortnite ku-App Store kanti i-Epic ngokushesha imangalela i-Apple ngemikhuba yokulwa nokuncintisana
Anderson gomez kusho
Sibuhlungu kanjani lesi simo, sekuyisikhathi sokwenza kucace bha ukuthi ubukhosi bunjalo ngale ndlela. Siyabonga ngokwabelana ngolwazi olubaluleke kangaka, imikhonzo: https://atencionalclienteargentina.com/
Phendula u-Anderson Gomez
UThomas Killus kusho
Okungenani i-Fortnite ijabulisa abantu abasha abaningi, ngingakuqinisekisa ngoba emphakathini wami ngabona abantu abaningana bekhuluma ngakho bengapheli ekuqaleni kobhubhane, ngabona nokuthi ukuxhumana kwami ​​nabo https://www.mintme.com kwehle kancane, imali yami yangokwezifiso yayingathengisi kahle kangako. Kungakho kubonakala kimi ukuthi isilinganiso esiphikisana neMidlalo ye-Epic seqile ngokweqile yi-Apple
Phendula uThomas Killus
Izinto zihamba kabi ku-Apple, umsunguli we-ProtonMail naye ubasola ngokuzimela